Ukuzivocavoca kwe-Graphomotor iminyaka emi-3 | Ukwakheka nezifundo
Ukuzivocavoca kwe-Graphomotor iminyaka emi-3
UMaite Nicuesa | | Amathiphu
Izingane zisenqubweni yokuguquka njalo kukho konke ukuphila kwazo. Ukuqeqesha kubaluleke kakhulu ebuntwaneni njengoba kuboniswe yi ukuvuselela kokuqala okuhlose ukuthuthukisa ukukhula kwamakhono engane ngokusebenzisa izikhuthazi ezifanele.
1 Ayini amakhono we-graphomotor
2 Amathokheni we-Graphomotor
3 Izinzuzo zamakhono we-graphomotor
4 Ukuzivocavoca izingane ezindala
Ayini amakhono we-graphomotor
I-Graphomotor isho amandla engane okuqala ukuveza ulimi lolimi lwezandla, isibonelo, ngomdwebo. Ngale ndlela, iqala ukuthola ubuchule emgqeni ngokunemba kokuma kwesandla nengalo. Okuthile okubalulekile, futhi, kokuzivocavoca kokubhala uqobo.
Ngakho-ke, ngokusebenzisa imisebenzi yepulasitiki Lokho kudaleke kakhulu ezinganeni, izingane ziqala ukwenza amakhono amahle wemoto. Ngokusobala, esimweni sekilasi, izingane ziphila inqubo yokuziqeqesha ezibashukumisela kule nhloso yokukhuluma ngokusebenzisa izimpawu ngoba othisha baphakamisa ukuthi izivivinyo zakhiwe ngaphakathi kwalolu lwazi ngaphakathi kohambo lokuqeqeshwa.
Kepha, ngaphezu kwalokho, kubalulekile futhi ukuthi, ekhaya uqobo, ingane inendawo yokudala engavula umcabango wayo. Ungahlanganisa imidlalo ye-graphomotor ngesikhathi samahhala esabiwe nomndeni. Isibonelo, ungaphakamisa ukwenza umdwebo wento ethile, into elula. Ngenzuzo eyengeziwe, ngaphezu kwalokho, ukuthi ingane inethuba lokuphinda lo msebenzi ezikhathini ezilandelayo. Njengoba, ulwazi nokuqeqeshwa nakho kukhulisa ikhono lakho kulayini.
Ungakhangisa futhi Imidlalo yokulingisa. Isibonelo, thenga ingane ebhodini lokudlala ukuze likwazi ukulingisa imisebenzi efana naleyo yothisha ekilasini. Ngale ndlela, ingane izozijabulisa ngenkathi idweba imigqa ebhodini bese isula umdwebo.
Ngaphandle kwalokho, ungasebenzisa futhi amathokheni we-graphomotor esebenza njengesiqondiso sokuzivocavoca ezinhlotsheni ezahlukahlukene zolayini ingane engaziphinda. Amashidi okusebenzela alula kodwa asebenza kahle ezingeni lezemfundo.
Kunezinhlobo ezahlukene zesifo sohlangothi, isibonelo, imivimbo evundlile noma zibheka phezulu, imigqa eyakha i-labyrinth, imigqa yobukhulu obuhlukile, imigqa elingisa ukuna kwemvula, umugqa osesimweni sejika, umugqa oqonde ngqo ... Kunconywa ukuthi uhlanganise izinhlobo ezahlukahlukene zokuzivocavoca umzimba ukuze ingane ifunde ukulingisa ubuhle bezinhlobo ezahlukahlukene zemigqa nokuhlolwa ekufezekisweni kohlobo ngalunye lohlangothi kuze kube yilapho izuza ukuzethemba nokuvikeleka.
Izinzuzo zamakhono we-graphomotor
Ngalezi zindlela, ingane izibeka phambi kwesikhala hhayi ngendlela esebenzayo kepha njenge-protagonist yokwakha inhloso ethile. Thola imibono ebalulekile efana ne- hamba, uhlaka, isikhala noma umbala.
Impumelelo eyenziwe ngalezi zivivinyo zokudala iphinde ithuthukise ukuzethemba kwezingane futhi isebenze ingqondo yengane ngokuya ngezinhloso zokufunda ezingokoqobo.
Ukuzivocavoca izingane ezindala
Kukhona okunye ukuzivocavoca okunconyelwe izingane ezindadlana. Isibonelo, ingane ingathola nemibono yepulasitiki ehlotshaniswa nokuzivocavoca kwe-graphomotrocity ngomongo ofana nolwandle, isikhala esiba nobuciko kanye nokufundisa lapho uhamba nengane yakho ekufezeni isibalo esithile. Isibonelo, a ISandcastle. Ngesikhathi sasebusika, ungakha futhi umuntu weqhwa kusuka endaweni emhlophe ekhangayo.
Futhi lapho usumdala, ukuvivinywa kokwenza izibalo kusuka ku- izingcezu zepulasitiki Idala ngokombono we-graphomotor ekwakheni umgomo othile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Amathiphu » Ukuzivocavoca kwe-Graphomotor iminyaka emi-3
Ukucindezeleka akuyona ukuphela kwembangela yokudinwa kwemisebenzi
Amakilasi e-EF English Live online okufunda isiNgisi